गोहीको आँसु- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ८, २०७६ गोविन्द पोखरेल
सप्तरीमा चरिरहेका बाख्रालाई दिनहुँजसो गोहीले मारेर खान थाल्यो  । ८/१० वटा बाख्रा गोहीको सिकार बनेपछि आतंक फैलियो । कोसी नदीको पूर्वी तटबन्धन नजिकैको माछापोखरीमा अचानक दुइटा गोही आएर बसेका रहेछन् । र, ती गोहीले जमिनमै आएर बाख्रा आक्रमण गर्न थालेका थिए ।
कोसी टप्पुका कर्मचारी र प्रशासनको सहयोगमा एउटा गोहीलाई केही दिनअघि नियन्त्रणमा लिइएको छ । अर्को गोही अचेल पोखरीमा छैन, कहाँ गयो, पत्तो छैन ।
वास्तवमा गोही कस्तो जीव हो ? यसले किन आक्रमण गर्छ ? कस्ता हुन्छन् यसका आनीबानी ? नेपालमा कस्ता–कस्ता गोही छन् ? विश्वभर कति प्रजातिका छन् ? गोहीका विशेषता के हुन् ? किन भनिन्छ ‘गोहीको आँसु’ ? यस्तै जिज्ञासाहरू मेट्न कोपिलाको यो अंकमा गोहीबारे चर्चा गर्दै छौं ।
गोही महाप्रलयबाट बाँचेको जीव हो । उक्त महाप्रलयमा डाइनोसोरको अस्तित्व सकिएको थियो । यिनीहरू डाइनोसोरभन्दा अघिदेखि नै पृथ्वीमा उत्पत्ति भएका जीव हुन् ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार २५० मिलियन वर्षअघि गोही देखा परेका थिए । परापूर्व कालका गोही अहिलेका भन्दै धेरै ठूला थिए ।
गोहीको पेटमा अम्लीयपन अत्यधिक हुन्छ । सग्लै खाएका जीवलाई पचाउन अम्लले मद्दत गर्छ । जनावरका हड्डी र सिङहरू पेटमा भएको अम्लले गलाइदिन्छ ।
गोहीले राति देख्न सक्छ । यिनीहरूको रक्तसञ्चार प्रणाली विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । अवाश्यकताअनुसार मुटुले रक्तसञ्चार हुने बाटोलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । गोही सास नफेरीकन एक घण्टासम्म पानीभित्रै बस्न सक्छ । मुटुमा चार खण्ड हुने, अन्डालाई गुँडमा राख्ने र बच्चालाई धेरै नै स्याहार गर्नेजस्ता गुणका कारण वैज्ञानिकले गोहीका केही विशेषता चरासँग मिल्ने भनेर तुलना गरेका छन् ।
गोही एक सरिसृप जीव हो । यो ‘क्रोकोडिलिया अर्डर’ मा वर्गीकरण गरेर राखिएको मांसाहारी जीव हो । मुख्यतः नुनिलो पानीमा पाइने गोही (क्रोकोडाइलस पोरोसेस), मगर गोही (क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस) र घडियाल (गाभियालिस गांगटिक्स) गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । यी तीन वर्गअन्तर्गत पनि २३ विभिन्न उपप्रजाति छन् ।
विश्वका ९१ मुलुकमा मात्र गोही छन् । पृथ्वीको गर्मी क्षेत्रमा पाइने यो जीव धेरै चिसो हावापानीमा बाँच्न सक्दैन । यसको शरीरको औसत तापक्रम ३० देखि ३३ डिग्री हुन्छ । यिनको पसिना ग्रन्थी हुँदैन । शरीरको तापक्रम औसत बनाउन मुख खुला राख्छन् ।यिनीहरू उभयचरजस्तो भए पनि जीवनको अधिकांश समय पानीमै बिताउँछन् । भाले र पोथीबीचको प्रजनन् प्रक्रिया पनि पानीभित्रै हुन्छ । भाले गोही पोथीभन्दा केही ठूला हुन्छन् । पूर्वी भारतमा पाइने ‘साल्ट वाटर’ गोही विश्वकै ठूला हुन् भने अफ्रिकामा पाइनेहरू साना गोही हुन् ।
दाँत ४ हजारवटा सम्म
गोही धेरै दाँत भएको जीवका रूपमा चिनिन्छ । औसतमा ८० देखि १०० वटासम्म दाँत हुन्छन् । यिनीहरूको दाँत झर्दै ५० पटकसम्म पलाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यिनीहरूको जीवनकालमा ४ हजारवटासम्म दाँत पलाएर झरेका हुन्छन् । एलिगेटरको दाँत बाहिर देखिँदैन । घडियाल र मगर गोहीको दाँत सजिलै देखिन्छ । तीखा र बलिया हुने भएकाले गोहीले कुनै जीवलाई टोकेपछि छाड्ने सम्भावना कम हुन्छ । केही प्रजातिका गोहीको दाँतमा अड्किएका खाना तथा मासु चराले खाइदिन्छन् । ‘इजिप्टियन प्लोभर’ चराहरू गोहीको मुखमा पसेर दाँतमा अड्किएका कुरा खाएर दाँत सफा गरिदिन्छन् । यी चरालाई ‘क्रोकोडाइलियन बर्डस्’ समेत भनिन्छ ।
७० वर्षसम्म बाँच्छन्
गोहीले आफ्नो आहारका लागि अन्य जीवलाई धरापमा पारेर/झुक्याएर आक्रमण गर्छ । आहार प्रजातिलाई ‘एम्बुस’ मा पार्ने भएकाले गोहीलाई ‘एम्बुस प्रिडेटर्स’ पनि भनिन्छ । सफा पानीमा पाइने घडियाल गोहीले माछा मात्र खान्छन् । नुनिलो पानीमा पाइने र नाइल नदीका गोहीले माछाबाहेक अन्य ठूला जीव पनि खान्छन् । गोहीमा धेरै समयसम्म केही नखाए पनि बाँच्न सक्ने अर्थात् भोक खप्ने क्षमता हुन्छ । एक घण्टामा १७ किमि हिँड्न सक्ने गोहीको औसत आयु ३० देखि ४० वर्ष भए पनि कतिपय गोही ७० वर्षसम्म बाँचेका तथ्य छन् । यिनीहरू १३ फिटसम्म लामो भएको रेकर्ड छ । तौल हजार केजीसम्म हुन्छ । आँखा र नाक शरीरको माथिल्लो भागमा हुन्छ । आँखा र नाक यसरी विकसित भएको हुन्छ कि पानीमा डुब्दा आँखा र नाक मात्र बाहिर निकाल्नसमेत मिल्छ ।
गोहीको जमिन र पानी दुवै स्थानमा सुन्ने सक्ने क्षमता हुन्छ । यिनीहरूमा सुँघ्ने क्षमता पनि उच्च हुन्छ । केही प्रजाति सुत्दा मुख खोलेर बस्छन् । कतिपय प्रजातिमा भने यस्तो हुँदैन ।
कहाँ कस्ता गोही ?
एलिगेटर्स गोही विशेष गरेर अमेरिका र चीनमा पाइन्छन् । यिनीहरूको थुतुनो ‘यु’ आकारको हुन्छ । यी सफा पानीमा बस्छन् । एलिगटर्सभित्र चिनियाँ र अमेरिकी गरेर दुई उपप्रजाति छन् । घडियाल नेपाल र भारतमा मात्र पाइन्छ । यिनीहरूको थुतुनो लामो र साँघुरो हुन्छ ।
साइमन उपप्रजातिको गोही मध्य र दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छन् । यिनीहरू एमाजोन नदीको तटीय क्षेत्रमा देखिन्छन् । मगर गोहीलाई पौडीबाजका रूपमा लिइन्छ । यिनीहरू राम्रोसँग पौडन सक्छन् । यिनको लम्बाइ चार मिटरसम्मको हुन्छ । नुनिलो पानीमा बस्ने गोहीहरू भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यान्मारलगायत देशमा पाइन्छन् ।अमेरिकन गोहीहरू क्यारेबियन र दक्षिण फ्लोरिडामा छन् । मध्य र पश्चिमी अफ्रिकामा स्लेन्डर गोही पाइन्छन् ।
कोलम्बिया र भेनेजुएलामा पाइने ओरिनोको गोही हुन् । यिनीहरू लोपन्मुख छन् । मेक्सिकोमा मोरलेटस् उपप्रजाति पाइन्छन् । क्युबाका द्वीपमा क्युबान गोही पाइन्छन् । यिनीहरू पनि लोपोन्मुख छन् । अफ्रिकाको साहारा क्षेत्र र आसपासमा नाइल गोही बस्छन् । यिनीहरू पनि सफा पानीमा बस्न रुचाउँछन् । इन्डोनेसियामा सियामेस छन् भने पश्चिमी अफ्रिकामा पुड्को गोही (ड्वार्फ) छन् । पपुवा न्यु गिनियामा गिनिया उपप्रजाति गोही पाइन्छन् ।
बच्चालाई अत्यधिक माया
गोहीका भाले पोथीको समागम प्रक्रिया पानीमै हुन्छ । पोथीले वर्षमा एकपटक तर सय वटासम्म अन्डा पार्छ । गोहीले कोरलेका सबै बच्चा बाँच्न सक्दैनन् । यिनीहरूमा बाल मृत्युदर अत्यधिक हुन्छ । ३० प्रतिशत मात्र बच्न सक्छन् । अन्डाको तापक्रमबाट भाले र पोथी छुटिन्छ । २८ देखि ३१ डिग्रीमा कोरलिने अन्डाबाट १०० दिनमा पोथी निस्कन्छे भने ३२.५ डिग्रीमाथि कोरलिनेमा अन्डामा ६४ दिनमा भाले निस्कन्छ । यस्तो अवस्थाको लिंग निर्धारण प्रक्रियालाई टेम्पेचर डिपेन्डेट सेक्स फ्याक्टर (टीडीएस) भनिन्छ ।
बच्चा कोरलेपछि आमाले मुखभित्र ती बच्चालाई राखेर रेखदेख गर्छ ।
नेपालमा कस्ता गोही छन् ?
नेपालमा मगर र घडियाल गोही मात्र पाइन्छन् । मगर गोही विभिन्न खोलानदी, ताल र सीमसार क्षेत्रमा छन् भने घडियाल गोही नारायाणी, राप्ती र कर्णाली नदीमा पाइन्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत एवं कसरास्थित घडियाल गोही प्रजनन् केन्द्रका वेदकुमार खड्काका अनुसार कोसीमा छाडिएका घडियाल गोही देखिन छाडेका छन् । सन् २०१६ मा गणना गर्दा नेपालमा १९८ घडियाल र ६७७ मगर गोही भेटिएका थिए । गतवर्ष चितवनको नारायणी र राप्तीमा गणना गर्दा २१९ घडियाल गोही पाइएका थिए । गणना गर्दा पानीबाहिर देखिएका गोहीलाई मात्र गन्ने गरिन्छ ।
घट्दै छन् गोही
‘प्रिहिस्टोरिक जीव’ गोहीको संख्या पछिल्लो समय घट्दै गइरहेको छ । क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं बायोलोजी एन्ड इभोलुसन अफ क्रोकाडालिएन्स किताबका लेखक गोर्डोन ग्रिगका अनुसार भूउपयोगमा आएका परिवर्तन र प्रदूषणका कारण संसारबाट गोही हराउँदै गइरहेका छन् । प्राकृति बासस्थान प्रभावित, जाल हान्ने प्रवृत्ति, आहारको कमी आदि कारणले गोही संकटमा परेका हुन् । छालाबाट विभिन्न प्रकारका ब्याग, बेल्ट तथा अन्य सामान बनाउनका लागि समेत गोहीको चोरीसिकारी बढेको छ ।
कसरी आउँछ गोहीको आँसु ?
बिनाकुनै मानवीय संवेदना र नाटकीय ढंगले निकालिने आँसुलाई गोहीको आँसु भन्दै आलोचना गरिन्छ । सर्वप्रथम गोहीको आँसुबारे १५औँ शताब्दीमा प्रकाशित भएको एउटा किताबमा उल्लेख थियो । ‘द भोएज एन्ड ट्राभल अफ सर जोन मेनडिभाइल’ नामक उक्त पुस्तकमा गोहीले रुँदै खाने गरेको उल्लेख थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न अनुसन्धान भएका छन् । बोगोरार्ड नाम गरेका एक रूसी न्युरोप्याथालोजिस्टले गोहीको आँसु नक्कली रहेको तथ्य १९२६ मा विश्वसामु उजागर गरेका थिए । गोहीले खाने क्रममा सालिभा निस्कन्छ । जसका कारण सालिभा मिसडाइरेक्ट हुन्छ अनि आँसु ग्रन्थी सक्रिय हुन्छ र झर्छ । यो तथ्यलाई ‘बोगोरार्ड सिन्ड्रोम’ भन्ने गरिएको छ । गोहीका अनावश्यक लवण आँसु ग्रन्थी हुँदै आँखाबाट निस्कने गरेको तथ्य पनि अध्ययनहरू आएका छन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा) प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ११:२७
घोरल, स्याल, दुम्सी, बाँदरलगायतका जनावरको पनि बस्ती बढ्दै थियो । चराचुरुंगी र कीराफ्यांग्रा पनि त्यतिकै थिए । जंगल सबैको साझा थियो । जंगलका जनावर कहिले मिलेर बस्थे । कहिले ठुलो द्वन्द्व चल्थ्यो । एउटै जंगलमा बसेका जनावरबीच झैझगडा हुन थालेपछि सबै जनावरले एउटा ‘जंगल प्रमुख’ आवश्यक भएको ठाने । सबै जनावरले सभा गरेर एउटा प्रमुख छान्ने निर्णय गरे ।
आइतबार बिहान जंगलको छेउमा रहेको ठूलो पीपलको फेदमा सबै जनावर भेला भए । त्यस सभामा सिंहले निकै फूर्तिफार्ति देखाइरहको थियो । उसले नै गैंडालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । गैंडाले सबै साथीहरूबीच भेलाको उद्देश्य बतायो र सिंहको सल्लाहअनुसार जंगलको प्रमुख चुन्नका लागि सबैलाई केहीबेर छलफल गर्ने समय पनि दियो । केहीबेरपछि हतारिँदै स्यालले हात उठाएर भन्यो, ‘हैन, हाम्रो जंगल र बस्ती धेरै ठूलो भइसक्यो । त्यसैले ठूलो जनावरले यस जंगल प्रमुखको जिम्मा लिन सक्लाजस्तो मलाई लाग्छ ।’
त्यसपछि सामूहिक छलफलबाट आएको कुरा म भन्छु भन्दै लोखर्केले हात उठायो, ‘जंगलमा प्रमुख अवश्य चाहिएको छ । यसका लागि अर्काको विनाशै गरिहालुँ भन्ने नठान्ने ठूलो जनावर हात्तीलाई सबै जनावरको प्रमुख बनायो भने पक्कै राम्रो हुन्थ्यो होलाजस्तो हामीलाई लाग्यो ।’ लोखर्केपछि कसैले भालु, कसैले बाघको नाम पनि लिए तर सिंहको नाम कसैले लिन चाहेनन् । सबै जनावरको तर्क सुनियो तर मृग र भालुचाहिँ बाँकी नै थिए ।
मृगको विचार सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको अभिलासा थियो । सबैले ढिपी लगाएपछि मृगले भन्यो, ‘सानाको पनि दिन आउनुपर्छ अनि कुनै कार्यको सुरुवात आफैंबाट हुनुपर्छ र मात्र समाजलाई सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिलेसम्म आफ्नो बासस्थान पनि बलियो बनाउन नसक्ने, अर्काको घर पनि भत्काउँदै हिँड्ने जनावरमा मैले बाँदरलाई देखेको छु । यो जनावर अरूभन्दा सानो पनि छ त्यसैले यो साझा पृथ्वीमा उसलाई प्रमुख बन्ने अधिकार दियो भने राम्रो होला ।’
मृगको कुरा सुनेर सबै जनाले गड्गडाहट ताली बजाए । बाँदरले गोलो घेरा लगाएर बसेका सबै जनावरलाई एकपटक हेरेर नमन (नमस्कार) गर्‍यो । त्यसपछि भालुलाई सोधियो– ‘बाँदरलाई यस जंगलको प्रमुख बनाउने सम्बन्धमा तपाईंको विचार के छ ?’ भालुले पनि सबैले ठिकै ठान्नुहुन्छ भने कुरो मनासिफ नै हो भन्ने विचार राख्यो । सभालाई लम्याएर ढिला गर्नुभन्दा अलि चाँडै सक्ने सोचले गैंडाले भन्यो, ‘ल बाँदरको पक्षमा कति जनावर हुनुहुन्छ ? हात उठाउनुहोस् ।’ यति भन्न नपाउँदै सिंह, बाघ र चितुवाबाहेक सबैले हात उठाएर बाँदरको समर्थन गरे । सबै खासखुस गर्दै थिए, ‘बाँदर निकै फुर्तिलो छ । उसले चायो भने निकै राम्रा काम गर्न सक्छ । अग्ला रूख चढ्न र जंगलमा कुद्न उसलाई कसैले भेट्दैन । यहाँ ठूला जनावरको मात्र कुरा भएन, क्षमता भएको जनावरको कुरा आयो, त्यसका लागि बाँदर नै योग्य छ ।’
सबैले समर्थन गरिरहेको देखेर गैंडाले बाँदरलाई आफ्नो विचार राख्न भन्यो । बाँदरले पनि कपाल मिलाउँदै भन्यो, ‘जंगल सबैको साझा घर हो । यहाँ सबै जनावर मिलेर बस्नुपर्छ र बसिरहेका छन् पनि । प्रक्रियागत रूपमा एउटा प्रमुख भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो । यसका लागि प्रायः सबैले मलाई विश्वास गर्नुभयो । म विश्वासघात गर्न सक्दिनँ । बरु आफैंबाट परिवर्तनका लागि सकारात्मक कदम चाल्न तयार हुने छु र यस जंगलका सबै जनावरका लागि जतिसक्दो राम्रो योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ बाँदरका कुराले सबै जना स्तब्ध भए । सिंह र बाघ पनि मौन रहे । बहुमतको कदर हुने नै भयो । जनावरहरू सभा समापन भएको थाहा पाएर एकएक गर्दै बाहिरिन थाले । बाँकी भएका केही हस्तीले बाँदरलाई फूलमालाले स्वागत गर्दै बधाई दिए र सबै जनावर आ–आफ्नो बासस्थानतिर लागे ।
प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ १०:५३